Izitayile ezimfutshane zaMadoda | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele ezimfutshane zamadoda
UAlicia tomero | | Ihlaziywe 07/12/2020 19:36 | Ukunyamekela, fashion, Isitayile esinenwele, Imizila
Ukunxiba iinwele ezimfutshane yinto ebalulekileyo imele uphawu lobuntu kunye nomnikelo olona phawu lubalaseleyo. Akwanelanga ukwazi zonke izitayile kunye neendlela ezikhoyo esitratweni, kodwa ngenxa yoku kufuneka ucamngce ngesinwele esikufanelayo ngokuxhomekeke kubuntu bakho ngakumbi ukumila kobuso bakho.
Ukuba ufuna ukwazi ngefashoni yakutshanje kwizinwele ezimfutshane apha Sishiya ezona zilungileyo zibeka isimbo kunye nemvelaphi. Ukuba xa ungathandabuzeki awuyazi ukuba yindlela efanelekileyo yokwenza iinwele, sikunika isikhokelo esincinci malunga nendlela onokucheba ngayo ngokufanelekileyo.
1 Luhlobo luni lokucheba iinwele olujongeka ngcono?
2 Iinwele ezimfutshane zamadoda
2.1 Inwele emfutshane enee-bangs eziphakanyisiweyo
2.2 Ukucheba iinwele
2.3 Uhlobo lwe toupee
2.4 Igradient emfutshane
2.6 Iinwele ezinqabileyo
Luhlobo luni lokucheba iinwele olujongeka ngcono?
Ukuba ubuso bakho bu-oval: Ubuso bakho bunemilo ejikelezileyo okanye enesikwere, enamathambo ezidlele abomvu kunye nesilevu emxinwa, sineendaba ezimnandi kuwe, kuba phantse zonke iinwele zijongeka zintle kuwe.
Xa ubuso bakho bujikeleze ngokupheleleyo: Ukucheba iinwele okufihla oko kujikeleza kukhethwa, ke iinwele ezongeza ivolumu phezulu zezona zilungileyo.
Ukuba ubuso bakho bunjengentliziyo: apho ibunzi libanzi kakhulu kunezihlathi, iinwele ezihamba kakuhle nezinwele ezinevolumu ebunzi nasezindlebeni.
Ukuba ubuso bakho buhlangene: Ngasesilevini kubanzi njengebunzi, iinwele zezinye zinomthamo ophezulu kwaye zithintela iinwele ezichetyiweyo kumacala omabini entloko.
Ubuso besikwere: Xa umhlathi o-angular kakhulu umi kakhulu, kuya kufuneka unamacala entloko achetywe kakuhle kwaye nenxalenye ephezulu imfutshane.
Zonke ezi zinwele ngoku zenza umkhwa kwaye ngaphezulu kwako konke zi-stylish kakhulu kubantu abancinci nakubantu abathanda ukuba nefashoni kwaye baziva bedlamkile.
Inwele emfutshane enee-bangs eziphakanyisiweyo
Yinwele esoloko idala imeko, Yeyona ikhawulezayo ukusika, leyo ingaze iphume ngesitayile kwaye ilungele phantse onke amadoda. Olu hlobo lusebenza kakuhle kuzo zonke iindlela zefashoni, zombini ezisesikweni nezingacwangciswanga.
Ngeenwele zakhe zibuyele umva: ukusikwa kusasebenza kwaye kufutshane kakhulu, kodwa icandelo elingaphezulu lishiyiwe lide kwaye liye lakanywa kwakhona.
Ngaphambili ii-bangs: Bacheba iinwele apho i-fringe ihlonitshwe kwaye ibekwe ngaphezulu kwebunzi. Olu hlobo lweenwele lolunye lwezinto zakudala ezisesefashini.
Oku kunqunyulwa kubandakanya ukushiya iinwele ezimfutshane ecaleni kwentloko, omabini amacala nangasemva kwaye ushiye isixa esikhulu seenwele ngaphezulu.
Le ndlela yayithandwa kakhulu ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX kwaye wayenxulunyaniswa neeklasi ukuya ezantsi nakwiqela lezitrato. Kule mihla yindlela yokwenza iinwele esefashonini, kwaye inika inkangeleko yolutsha, entsha kunye nenomdla.
Nantsi lapho Inguqulelo yeklasikhi enamacala amafutshane kakhulu kunye neenwele ezinde zetoupee ikame kwakhona umva phezulu. Olunye uguqulelo luyafana kodwa lunobunkunkqele ngakumbi, kuba lubonelela ngenwele efanayo, kodwa ngenxalenye ephezulu kakhulu ixesha elide kwaye apho uhlobo oluthile lokuzoba lwenziwe emacaleni entloko.
Uhlobo lwe toupee
Kubonakala ngathi i-Undercut haircut iya kuba nayo ukubonakala okufanayo kodwa ngobude obumangalisayo, iinwele zakhe zibuyele phezulu. Ngomgwebo olungileyo, unokugcina i-toupee yakho ihambile okanye ezinye zeetshixo zakho ziya kuwa emacaleni. Nazi imicu eyenziwe ngeenwele ezigobileyo, Apho siya kuhlala sishiya iinwele zethu ezi-wavy okanye ezinyibilikisiweyo zibekiwe, ngaphandle kokude ukuba siwele emacaleni.
Olu hlobo lusikiweyo lufutshane kakhulu kwaye iyathandeka kakhulu kwabo baneenwele ezingqindilili okanye ezigobileyo kwaye ezixineneyo. Amacala entloko asikwe ngobude kwaye icala eliphezulu lishiyekile ekuthotyweni kwenxalenye esezantsi. kodwa into ende
Le nwele Amacala amafutshane kakhulu entloko kwaye umphezulu ubude. Ukubonakala kwayo kubonisa indlela yokwenza i-hairstyle apho inkathalo ekhethekileyo ichazwe ekubunjweni kwayo kunye nokumila kwaye kuye kwagxininiswa ukushiya i-wavy kunye nokubonakala kakuhle.
Le iinwele bezisoloko zisefashini, kuye kwaba lukhuthazo lolutsha oluninzi Ndiyabulela kwinto yokuba ngelo xesha ibeke umkhuba phakathi kwabanye abadumileyo abanjengoZac Efron okanye uDavid Beckham.
Ngelixa olu hlobo lweenwele luhlala lusaziwa njenge-crest lunokudityaniswa kunye isitayileI-faux haux" apho ukusika kuhlala kuhlala kunjalo kuphela xa kusiza ngomgca ophawulwe emacaleni entloko, phakathi kweenwele ezimfutshane nezinde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele ezimfutshane zamadoda
Iindidi zezihlangu zamadoda
Izipho zamadoda atshatileyo